Himalaya Dainik » गीतमा विवाहको लगन !
गीतमा विवाहको लगन !
काठमाडौं : मंसिर महिना सुरु भइसकेको छ। यो महिनालाई विशेषगरी विवाहको महिना मानिन्छ। लगनको महिनामा दुई परिवारबीच नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुन्छ। विवाहलाई स्मरणीय बनाउन गीतसंगीतको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यसैक्रममा आइतबार गीतकार विनिता खनालले विवाहसम्बन्धी गीति एल्बम ‘लगनगाँठो’ सार्वजनिक गरेकी छन्। यो एल्बममा पाँच गीत समावेश छन्। एल्बममा ‘आयो है आयो’ (मेहेन्दी गीत), ‘धुतुरी धुतुरी बाजा बजाई’ (जन्ती गीत), ‘दौरा सुरुवाल चिटिक्कै’ (रत्यौली गीत), ‘बिदाइ गर्न छोरी तिमीलाई’ (दुलही अन्माउने गीत) र ‘छमछम पाउजु’ (रिसेप्सन गीत) समावेश छन्।
‘धुतुरी धुतुरी बाजा बजाई’ मा मेलिना राई र श्रीवास्तव खरेल, ‘दौरा सुरुवाल चिटिक्कै’ मा मीना निरौला, ‘बिदाइ गर्न छोरी तिमीलाई’ मा वानिका प्रधान र ‘छमछम पाउजु’ मा निकिता थापा र प्रताप दासले स्वर
कार्यक्रममा यी पाँचवटै गीतका भिडियो एकसाथ सार्वजनिक गरियो। विवाहका पाँच गीतका भिडियोमध्ये आइतबार ‘मेहेन्दी’ युट्युबमा सार्वजनिक गरिएको हो। रत्यौली, जन्ती, बिदाइ र रिसेप्सन गीत भने क्रमशः मंसिर ८, ९, ११ र १२ गते सार्वजनिक हुने जानकारी कार्यक्रममा दिइयो।
सबै गीतका भिडियो सुव्रत आचार्यले निर्देशन गरेका हुन्।
गरिमा शर्मा, शर्मिला मल्ल, शिशिर राणा, सम्झना बुढाथोकी, रश्मी भट्ट, हेमन्त गौतम, दिभास्ना त्वानको पनि भिडियोमा अभिनय
‘लगनगाँठो’ एल्बममा समावेश गीतमा किरण कँडेलको एकल संगीत छ। ‘आयो है आयो’ गीतमा प्रविशा अधिकारी, ‘धुतुरी धुतुरी बाजा बजाई’ मा मेलिना राई र श्रीवास्तव खरेल, ‘दौरा सुरुवाल चिटिक्कै’ मा मीना निरौला, ‘बिदाइ गर्न छोरी तिमीलाई’ मा वानिका प्रधान र ‘छमछम पाउजु’ मा निकिता थापा र प्रताप दासले स्वर भरेका छन्।
भिडियोमा विजु पार्की र रेश्मा घिमिरे दुलहादुलहीको भूमिकामा छन्। अभिषेक श्रेष्ठ, गरिमा शर्मा, शर्मिला मल्ल, शिशिर राणा, सम्झना बुढाथोकी, रश्मी भट्ट, हेमन्त गौतम, दिभास्ना त्वानको पनि भिडियोमा अभिनय छ। गीतको भिडियोका छायाकार उत्सव दाहाल र उत्तम हुमागाईं हुन्। भिडियोकी क्रिएटिभ डाइरेक्टर जया शर्मा हुन्।
कार्यक्रममा कलाकार शर्मिला मल्लले गीतमा आफ्नो भूमिका सानो भए पनि काम गर्न निकै रमाइलो भएको बताइन्। रेश्मा र गरिमाले पनि राम्रो टिमसँग राम्रो गीतमा अभिनय गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे। अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
१६ बर्षे चार्ली बनिन् टिकटकमा १० करोड फलोअर्स पाउने पहिलो व्यक्ति
आज मंसिर ०९ गते मंगलबारको राशिफलः यी ४ राशिको भाग्य चम्किलो
पछिल्लो पुस्ताका नायकबीच स्टारडमकाे लडाइँ, काे होला नम्बर एक ?
फ्यानले रुचाएका नम्रताका ‘ब्युटी लुक्स’ [फोटो फिचर]
पिसाब रोकिएकी उनलाई कुनै अस्पतालले भर्ना नलिएपछि चाहार्दा-चाहार्दै मृत्यु
पोखरामा एकैदिन कोरोनाबाट थप ७ जनाको मृत्यु
भोजपुरमा कोरोनाले लियो २४ वर्षिया युवतीको ज्यान